Akhri Khudbaddii Uu Hogaamiye Xirsi Ku Furay Kalfadhigii 3aad Ee Golaha Dhexe Ee Xisbiga WADDANI Iyo Arrimaha Uu Diiradda Saaray | Foore News
Home Warar Akhri Khudbaddii Uu Hogaamiye Xirsi Ku Furay Kalfadhigii 3aad Ee Golaha Dhexe...
Akhri Khudbaddii Uu Hogaamiye Xirsi Ku Furay Kalfadhigii 3aad Ee Golaha Dhexe Ee Xisbiga WADDANI Iyo Arrimaha Uu Diiradda Saaray
Waxa Uu Hogaamiyaha Xisbiga WADDANI Dardaaran U Diray Musharraxiintii Aan Kusoo Bixin Liiska Kama Dambaysta Ah Ee Xisbiga
Hargeysa, March 31, 2021- (Foore)- Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay nidaamkii ay u soo kala xuleen Musharraxiinta Golayaasha Deegaanka iyo Wakiillada ee xisbiga WADDANI isaga oo baaq u diray xubnaha aan ku soo bixin liiska kama dambaysta ah ee ay u gudbiyeen Komishanka halka uu sidoo kalena baaq u diray shacabka reer Somaliland, baaqaasi oo la xidhiidha xaaladda cudurka saf-marka ah ee Covid19.
Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan oo si rasmi ah u furay kal-fadhiga saddexaad ee Golaha dhexe ee Xisbiga WADDANI ayaa kelmaddii uu halkaasi ka jeediyey waxa uu ku yidhi: “Sharaf bay ii tahay in aan furo shirka. Waxaan kelmad ka odhan doonaa Musharaxiinta Xisbiga u taagan ee u taagan Doorashada isku sidkan ee Wakiillada iyo Deegaanka. Aniga iyo rag badan oo halkan joogaa maadaama aanu ahayn Guddidii kala xulista. 13 xubnood baanu ahayn. Waxaanu rogrognay oo muddo ku hawlanayn sidii aanu u waafajin lahayn shuruucdii iyo nidaamkii u yaallay xubnaha Musharaxiinta ah. Gaar ahaan xeer nidaamiyaha wakiilladu ansixiyeen iyo xeer hoosaadka guddida. Waxaanu kadib u gudubnay xubnihii soo gudbistay in la kala xulo ee loo gudbiyo in ay u tartamaan qaarna Wakiillada qaarna deegaanka. Aad iyo aadbaan ugu mahad celinayaa dadka reer Somaliland ee sida qayral caadiga ah u soo doortay in ay Musharraxiin u noqdaan oo muujinaysay dareenka wanaagsan ee Bulshadu ku qaabishay xisbiga WADDANI iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin qof waliba in uu kaalin uu isku sharraxo ka helo waxaanan leeyahay inta ku guulaystay ee nasiibku siiyay waan idiin hambalyaynayaa waanan idiin ducaynayaa. Ilaahay baa idiin qaddaray in aad gudubtaan. Kuwa kale ee hadhay kama fiicnidin kamana aqoon badnidin intii hadhayna ee aanay u suurto galinna waxaan leeyahay Ilaahay uunbaan qaddarin. Nidaamkana (Process) waxaanu ku dadaalnay in uu noqdo nidaam caddaalad ah. Wixii aqoontayadu ahayd wixii aanu ka garanay ayaanu samaynay. Xubnaha hadhay waxaan leeyahay ma aha in la idiin dooray in aydaan Musharraxiin noqon oo ah in la idinka maarmay. Macnaheedu ma aha haddii aan la idiin garan inaad tihiin xubno ka liita kuwaa kale ee la soo saaray. Ku qanca in mustaqbalka xisbigu dheer yahay, mustaqbalka dalkeenu dheer yahay oo aynaan maalin iyo kursi hal mara aanay ahayn” ayuu yidhi Hogaamiyaha xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi:
“Waxaad la socotaan xaaladda Cudurka COVID_19 in ay tahay mid halis ah iyo sida uu u laba kacleeyey. Dhammaan shacabka iyo inteenna halkan joogtaba waxaan leeyahay ha la qaato taxadarka iyo tilmaamaha ay masuuliyiinta Caafimaadku bixinayaan. Dad badan baa laga yaabaa in ay yidhaahdaan waa iska qaddar. Walaalayaal waa dhab oo Muslim baynu nahay oo waa qaddar waan aaminsanahay balse waxa Nabi Muxammed SCW la waydiiyay Awrkayga ma iska sii daayaa oo Ilaahay ma u tala saartaa?, ayaa la waydiiyey markaasuu yidhi mayee Dabar oo Ilaahayna Talo saaro. Markaa talo-saarashada iyo qaddarka iyo asbaabta oo aad la timaaddo ayaa la isku darayaa. Qof walba waa in uu ku dadaalaa in asbaabta lala yimaad ka hortagga ah oo la qaato tilmaamaha caafimaadka si aynu u badbaadno umaddeenana u badbaadinno” ayuu yidhi Hogaamiye Xirsi.
Halkan Ka Daawo Sidoo Kale Khudbadda Oo Muquaal ah:
Previous articleHaweenayda Awoodda Badan Ee Ay Walaalaha Yihiin Hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Ayaa Hanjabaad Culus U Dirtay Koonfurta Kuuriya
Next articleWaddanka Kenya Oo Walaac Culus Ka Qaba Weerarro Argagixiso Oo Loo Adeegsado Diyaaraado Iyo Duuliye Halis Badan Oo Ay Baadi Goob Ugu Jiraan